प्रकृतिको खुसी शाश्त्र - Dwarka Parichay
DwarkaParichay.com May 4, 2020 Articles, Corona Update, Lockdown, Update
कहिले सामाजिक संजालमा भूलेर बस्नु, टिभी ,रेडियो ,यूट्यूवमा भुल्नु । कहिले घरायसी काममा व्यस्त रहनु, कहिले ज्ञानगुनका कुरा पढ्नु, हेर्नु ,कहिले भावनाहरु कपीमा उर्तानु ,कहिले समाचार हेरेर मन उदास–उदास हुनु । मरेका लासहरु, विरामीहरु र दुःख पाएका बटुवाहरु, राहतमा लाइन लागेका अनुहारहरु हेर्दै गर्दा अनिश्चित भविश्यको कैदी हुँ भन्ने महसुस भएको हुनु दैनिकी भएको छ आज ।
भारतिय संचारकर्मी एवं लेखक एस.एस. डोगरा पनि यस कुरामा सहमत छन्– “कि आत्मा जून अदृष्य छ, साइन्सले सिसाभित्र मान्छे राखेर हेर्दा पनि भेट्न सकेन,कता कसरी उडेर जान्छ थाहा हुन सकेन ।”
हिन्दु धर्मावलम्बीहरुले जून विश्वासले प्रकृतिमा रहेका हरेक जीव र बोटविरुवाको,खाध्यान्नको पूजा गर्दछन्, त्यसले गर्दा मानिसलाइ प्रकृतिको सम्मान गर्न सिकाएको छ । तर आजकल औपचारिकतामा सिमित हुँदै गएको छ, जीव मानव केवल यन्त्र मानव बन्दै गएको छ सायक त्यसैले यस्तो दुर्घटना झेल्दैछ ।
एकातिर आफ्नासंग सामाजिक दुरी र भौतीक दुरी कायम गरेर अछुत जस्तो व्यवहार गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएकोले मानवको मनस्थिति नैं खलवल भएको छ भनें
अर्कोतिर बिहानैं उठ्ने बित्तिकै चरा चुरुंगीका मधुर आवाजहरु कानमा गुन्जिन्छन् , सुन्दर हिमाल, पहाड हरियाली र फूलहरुले मनै मोहित बनाउँछन् र स्वच्छ हावा लिएर स्वस्थ्य जीवन बाँच्ने रहर पलाउछदैछ पलपल ।
सायद यो लकडाउन भएको थिएन भने बिहानैं देखिको व्यस्त जीवन, गाडीहरुको ट्यांट्यां र टुंटुं, ध्वनी प्रदुसण, वायू प्रदुशणमा दिनदिनै गलेर, आफैंभित्र सडी रहेको थियो मान्छे । केमिकल युक्त खाधान्न खाँदा रोगी भएर बाँची रहेको थियो मान्छे ।
आज कमसेकम मानवलाइ आफैंले अर्गयानिक खाध्यान्न, तरकारी उत्पादन गरेर आत्म निर्भर हुनु पर्ने रहेछ भन्ने चेतना पलाएर आएको छ । विदेशमा अड्किएका नेपालीहरुको पीडा देख्दा लाग्छ, नेपालमा नैं कुनैं काम गरेर ,उव्जाउ गरेर खेती विक्ने वातावरण सरकारले सिर्जना गरेको भए जमिन बाँझो पनि हुने थिएन र धेरै नेपालीहरु रोजगारीको निम्ति परिवारबाट विछोडिनु पर्ने थिएन ।
शहरबाट गाउँगाउँ फर्केर जमिनमा काम गरिरहेका मानिसहरु देख्दा लाग्छ । कुनैं ठूलो विपत्ती आउदा नेपाली धर्तीले र संसारकै धर्तीले माया पाउने दिन आएका पो हुनु कि ?
मानवशाश्त्री ब्रोनिस्ल मेलीनोस्कीको विचारमा “घर भनेको डुंगा,माटो पानीको समिश्रम मात्र होइन , मन ,भावना ,दुख सुख पिडा बाँडिने थलो हो ।”
मानवका मनभित्रका फोहोर र दुषित भावनाहरु चाँह पखाल्न सकिन् कि सकिनन् होला खै ?